Lalàna & Zo: Vavolombelon’i Jehovah any Rosia | JW.ORG
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Cebuano Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Icibemba Indonezianina Iokrenianina Italianina Kinyarwanda Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Yorobà
Topy Maso An’i Rosia
Faly ireo Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny voalohany, fa afaka mivavaka milamina satria nosoratan’ny Federasionan’i Rosia ho ara-dalàna, tamin’ny 1992. Naverin’ny Vavolombelona nosoratana ara-panjakana indray anefa ny fikambanan’izy ireo tamin’ny 1999, mifanaraka amin’ny lalàna rosianina momba ny fahalalahana hanaraka ny feon’ny fieritreretana sy momba ny fikambanana ara-pivavahana. Misy an-jatony ny fikambanana ara-pivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah voasoratra ara-panjakana, manerana an’i Rosia.
Mitombo foana anefa ny olana atrehin’ny Vavolombelon’i Jehovah any, ary tena atahorana hahatonga azy ireo tsy ho afaka hivavaka an-kalalahana intsony izany. Manenjika azy ireo ny mpitandro filaminana any nanomboka tamin’ny 2009, ka ilay Lalàna Hanoherana ny Fikambanana Mahery Fihetsika no ampiasain’izy ireo. Lazain’ny fitsarana any Rosia fa mampidi-doza ny boky maromaro avoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah, ary nampidiriny tamin’izany koa ny tranonkalan’ny Vavolombelon’i Jehovah jw.org. An-jatony ny tranon’ny Vavolombelona sy trano fivavahan’izy ireo nataon’ny polisy savahao. Ampangain’ny mpampanoa lalàna ho mpandika lalàna sy mpanao heloka bevava ny Vavolombelona, satria fotsiny hoe manatrika na mitarika fivoriana ara-pivavahana.
Efa milaza ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona sy ny fikambanana iraisam-pirenena hafa fa tsy mankasitraka ny zavatra ataon’i Rosia. Tsy nampihena ny fampijaliany sy ny fanavakavahany Vavolombelon’i Jehovah anefa ny fitondrana any. Vao mainka aza ny manam-pahefana manakantsakana tsikelikely ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah.